Topy Maso Momba An’i Liechtenstein
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Oromo Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Zoloa Éwé
IRAY amin’ireo firenena kely indrindra eran-tany i Liechtenstein. Any amin’ny tendrombohitr’i Alpes no misy azy, eo anelanelan’i Soisa sy Aotrisy. Ny Selta, ny Romanina, ny olona avy any Rhétie, ary ny Alamans no nipetraka tany nandritra ny taonjato maro. Tokony ho 1500 taona lasa izay ny fokon’ny Alamans no nanorim-ponenana tany, ary taranak’io foko io ny roa ampahatelon’ny mponina any.
Ny Alemà no fiteny ofisialy, nefa manana fitenim-paritra koa ny tanàna tsirairay. Anisan’ny sakafo mampiavaka an’io tany io ny Tüarka-Rebel, izay vita amin’ny katsaka, sy ny Käsknöpfle, izay paty asiana fromazy.
Akanjo mampiavaka ny foko iray
Rehefa tonga any ny mpitsidika dia mahatazana tendrombohitra feno lanezy, lohasaha maitso mavana, tanimboaloboka, ary zavamaniry isan-karazany. Ahitana karazana orkide dia efa ho 50, ohatra, any. Misy tranombakoka sy trano fanaovana teatra ary toerana fanamboarana divay koa any. Be mpizaha tany àry any, na fahavaratra na ririnina.
Efa hatramin’ny 1920 tany ho any no nisy Vavolombelon’i Jehovah tany Liechtenstein. Misy 90 eo ho eo izao izy ireo any, ary mampianatra an’izay lazain’ny Baiboly amin’ny tompon-tany sy ny vahiny.
Mponina: 37 000
Fivavahana: Katolika ny ankamaroan’ny mponina
Iza amin’ireto no mahalaza an’i Liechtenstein?
A. Anisan’ireo firenena roa voahodidina tany tsy manana morontsiraka.
B. Ahitana karazana biby mampinono 50 mahery.
D. Ahitana karazana zavamaniry 1600 eo ho eo.
E. Firenena tsy manana tafika.
Hizara Hizara Fitsidihana An’i Liechtenstein